माडीमा बालिका बलात्कार गर्ने अपराधीलाई फाँसी दे – दर्दनाक भिडियो - Enepalese.com
माडीमा बालिका बलात्कार गर्ने अपराधीलाई फाँसी दे – दर्दनाक भिडियो
इनेप्लिज २०७४ जेठ २८ गते १:५८ मा प्रकाशित
स्कटनेपाल १० जून २०१७ : नेपाली समाज सेवी सावित्री सुबेदीजी स्टाटस”माडीमा बालिका बलात्कार” र उनि बालिका लाइ बलात्कार पछी मारेर फालिए पछी उनले यसरी पोखेकी छन आफ्नो आक्रोश सामाजिक संजालमा : हेर्नुहोस भिडियो सहित !!!
दिनहुँ बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भएका छन,राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ । अपराधीकरण बढदो अवस्थामा छ , के यो असफल मुलुक बन्ने लक्षण हो कि नाइ ? अपराधीहरुलाई राजनैतिक संरक्षण गर्ने मतियारहरु होसियार । नेपाली जनताले माफि दिने छैनन, किनकि अपराध अपराध नै हो । कानुनी शासन र विधिको राज समाप्त भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्दैछ ।